MPIARA-MIASA AMIN'NY TOMPO NY MINO | FJKM Amboniloha
MPIARA-MIASA AMIN’NY TOMPO NY MINO
Mpiara-miasa hoe e? Mpiara-miasa ahoana? Raha jerena ny teny fototra, ny hoe “mpiara-miasa” dia entina ilazana ireo izay mpiray asa amin’ny toeram-piasana iray ka samy manatanteraka ny anjara andraikitra tandrify azy ny tsirairay hahatanteraka ny lasin’asa kasaina hotontosaina (projet). Ry mpamaky malala, fitiavana Andriamanitra, Andriamanitry ny Famonjena Izy ka ny hanafaka ny olona amin’ny fahotàna ary hanome Fiainana mandrakizay ho an’izay rehetra mino Azy no kendreny (Jao.3,16). Efa vitany tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy ny famonjena izao tontolo izao. Mila anao kosa anefa Izy ho mpiara-miasa Aminy, hampiely izany Vaovao Mahafaly izany, ka hitaona ny olona handray an’i Jesoa Kristy ho Tompo sy Mpamonjy azy. Ho vita fihavanana Aminy.
Ireto no tsara hampahatsiahivina anao, araka izany, amin’ny maha mpiara-miasa amin’ny Tompo anao:9
Andriamanitra no miantso anao ho mpiara-miasa Aminy: Izy Ilay hatrizay hatrizay ka ho Mandrakizay (Eks.3,10; Jao.15,16);
Toeram-piasana izao tontolo izao izay itoriana ny amin’ny Fanjakan’Andriamanitra (Mar.15,16);
Asa fototra tanterahina dia ny mitory ny filazantsaran’ny Famonjena amin’ny olombelona rehetra: manafaka ny olona amin’ny gadra izay mamatotra azy (Eks. 3, 7-14); Mampihavana ny olona amin’Andriamanitra. (2Kor.5, 20.21; Asa.19,8-12); manao ho mpianatra ny firenena rehetra, mampianatra azy hitandrina izay rehetra efa nandidian’ny Tompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay omen’ny Tompo anao: mampianatra, manasitrana, maminany…(1Kor.12, 27-30);
Efa atoron’Andriamanitra amin’ny alalan’ny teniny ny antsipirihany amin’ny dinidinika tsara ho fantatra ny amin’ny fomba hanatanterahana ny Asa ny fandaminanany anjara andraikitry ny tsirairay avy (1Tan.23,1-5), ny atao manoloana ny olona mandray na tsy mandray ny irak’Andriamanitra (Lio.10, 1-12);
Tsy ianao irery no mpiara-miasa amin’Andriamanitra fa olona maro no nomeny fanomezampahasoavana any amin’ny fanahy iray hiaraka na hifandimby hanatanteraka ny teny fikasany (1Kor.12). Aoka tsy izahozaho na hanambany tena fa samy mpiara-miasa amin’Andriamanitra izay efa nantsoiny;
Tanjona kendrena: tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay;
Fiantohana: momba anao Jesoa, miasa ao anatinao Izy “na amin’ny fikasana na amin’ny fanatanterahana”
Tsarovy àry eo amin’izay rehetra ataonao fa mpiara-miasa amin’Andriamanitra ianao ! Iray asa, iray tanjona. Aoka tsy hifanipaka amin’izany ny ataonao rehetra, indrindra eo anivon’ny fiarahamonina izay anirahan’ny Tompo anao. Marina fa tsy manery anao ny Tompo hankato ny teniny; kanefa aza hadinoina fa izay nandà ny Tenin’Andriamanitra na ny iraka ampanaoviny hatreto dia loza na fahaverezana no miandry azy. (Nom.16, 23-34) Mbola hampamoahina ianao ny amin’izay nampiasanao ny fanomezam-pahasoavana nomen’ny Tompo anao. Koa miambena, mahareta, tanteraho ny iraka ampanaovin’ny Tompo anao: ataovy tsara, mahefa be amin’ny asan’ny Tompo!
Tandremo fa Satàna koa dia manana ny mpiara-miasa aminy izay mikendry mandrakariva ny hitaona ny mpiara-miasa amin’Andriamanitra hiala amin’ny iraka izay nampanaovina azy: manakivy, mampatahotra, mamitaka, miseho ho namana kanefa maka fanahy ka manao izay hampisalasala anao tsy hanatanteraka ny irak’Andriamanitra fa hanao zavatra hafa tsy mifanaraka amin’izany. (Neh.6, 12.14) Rehefa tena mivavaka mifandray hatrany amin’Ilay Tompon’ny Asa anefa ianao dia izy mihitsy no miasa ao anatinao sy izay mpiara-miasa aminao ka vita izany (Neh.6, 16d)….“Maneke an’Andriamanitra hianareo, ary manohera ny devoly, dia handositra anareo izy.” (Jak.4, 7) Sahia mandà izay tsy araka ny sitrapon’Andriamanitra fa aza manara-drenirano fotsiny. Araho sy tanteraho an-tsakany sy andavany ny iraka ampanaovin’’Andriamanitra anao. Manantena anao ny Tompo. “handeha amin’izay rehetra hanirahako anao ianao, izay handidiako anao no hambaranao.Aza matahotra, hamonjy anao Aho” (Jer. 1,7.8 ) Aoka hijoro ho mpiara-miasa amin’Andriamanitra ianao. Aza mivadika Aminy fa tsy foana akory ny fikelezanao aina ao Aminy.”Aoka hatoky hatramin’ny fahafatesana ianao dia homeko anao ny satroboninahitra fiainana” hoy Jesoa. (Apo.2, 10b)
Olomboaantso hamita iraka ianao: “IRAKA SOLON’I KRISTY”, Tsarovy mandrakariva izany na inona na inona andraikitra tananao ary na aiza na aiza misy anao. Tianao “hiadana sy ho finaritra ary ho sambatra” ve ny firenenao?
MIHAVANA AMIN’ANDRIAMANITRA ARY METEZA HITONDRA SY HITAONA NY OLONA HIHAVANA AMIN’ANDRIAMANITRA IANAO HANANANY NY TENA FIAINANA FENO FIADANANA MANDRAKIZAY. METEZA IANAO HO MPIARA-MIASA AMINY.